सबै विधाको फेब्रुअरीका लागि news समाचार वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | काल्पनिक, किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास, कथाहरू
यो यहाँ छ फेब्रुअरी फेरी वर्षको छोटो महिना भरिएको छ समाचार किनभने प्रकाशन विश्व रोकिदैन। त्यहाँ धेरै छन्, र तपाईंले सँधै तिनीहरूको बीचमा चयन गर्नुपर्दछ। यी मेरा chosen वटा चुनिएका व्यक्ति हुन्, सबै विधा र सबै स्वाद को लागी: एक डेब्यू, कि एशले आड्रेन, र अधिक स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय नामहरू जस्तै जो पर्वत o जो अबक्रोम्बी। वा को जन्मभूमि मानुएल जबोइस, सुसाना रोड्रिगिज लेजाउन y टोनी हिल.
1 मिस मार्स - मानुएल जबोइस
2 छाला अन्तर्गत - सुसाना रोड्रिग लेजौन
3 Instinct - एशले अड्रेन
4 ह्यामनेट - म्यागी ओ'फरेरेल
5 ओपन ग्रेभ - जो हिल
6 टेरेसा लान्जाको गाढा अलविदा - टोनी हिल
7 शान्ति समस्या - जो Abercrombie
मिस मार्स - मानुएल जबोइस
4 फेब्रुअरीको लागि
यो पछि पत्रकार र लेखक मानुएल जबोइसको दोस्रो उपन्यास हो मलाहेर्बा, जुन पहिले नै धेरै सफल भएको छ। र हामीलाई अनौंठो बताउँछ एक केटी बेपत्ता एक सानो शहर मा उनको आमाको विवाहको समयमा मृत्यु को गैलिशियन तट। ताराहरू Berta, एक पत्रकार जो ठाउँमा आउँछ मुद्दाको अनुसन्धान २ 25 बर्ष पछि। त्यहाँ सामान्य सानो वातावरण छ जहाँ सबैले सोच्छन् कि उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ र अन्तमा सबैले केही लुकाउँदछन्।
छालामुनि - सुसाना रोड्रिगिज लेजाउन
10 फेब्रुअरीको लागि
गत वर्ष म भाग्यशाली थिए सुसाना संग भेट र कुरा, यो वास्तवमै थियो भने पनि। त्यहाँ उसले हामीलाई यो नयाँ उपन्यासको बारेमा केही बताइसकेको छ, क रोमाञ्चक उनको अघिल्लो शीर्षकहरूका शिरामा जसमा उनले हामीलाई उनको नामबाट सुरू गर्ने एक धेरै अपारंपरिक निरीक्षकसँग परिचय गराउँछ, मार्सेला पाल्देलोबो.
Es निरीक्षक Pamplona मा राष्ट्रीय पुलिस कोष र सामान्यतया अर्डरलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुहोस्जस्तै, तपाईको काममा अभिनय गर्ने। यस कथामा, जहाँ उसले आफ्नो अतीतको सामना गर्नुपर्दछ, क अपमानजनक बुबा जो आफ्नो आमाको मृत्यु पछि देखा पर्दछ, निरीक्षक को मामला मा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय एक परित्यक्त बच्चा एक भत्केको भाडा कारमा ड्राइभरको ट्रेस बिना, तर रगतका दागहरू र पा wheel्ग्रा ट्र्याकहरूको साथ। यसको लागि तपाइँसँग तपाइँको सामान्यको मद्दत हुनेछ उपनिरीक्षक मिगुएल बोनाचेरा.
सहज ज्ञान - एशले अड्रेन
18 फेब्रुअरीको लागि
Es सबैभन्दा प्रत्याशित पुस्तकहरू मध्ये एक यस बर्ष र तीस भन्दा बढी देशहरुमा प्रकाशित हुनेछ। यो एक को बारे मा छ रोमाञ्चक मनोवैज्ञानिक एक आमा, एक छोरी र उनीहरूको गाह्रो सम्बन्धको बारेमा। यो मानिन्छ साहित्यिक शुरुआत १ 1982 XNUMX२ मा जन्मेका क्यानेडाली लेखक एश्ले अड्रेन द्वारा, जसले पहिले नै बचेका समीक्षा प्राप्त गरेका छन्।
ताराहरू Blythe, तपाई आफ्नो जीवनको त्यस्तो विन्दुमा पुग्नुभयो जहाँ तपाई आश्चर्यचकित हुनुभयो यदि तपाईं साँच्चिकै खुशीको जीवन बिताइरहनुभएको छ भने, एक सिद्ध पति र एक देवदूत छोरी संग। वा ऊ दुर्व्यवहार द्वारा चिह्नित उसकी आमा र हजुरआमाको कडा कहानी दोहोर्याइरहेको छ। तपाईं पनि कि भनेर श doubts्का लाग्न शुरू फक्स, उनको लोग्नेके उहाँ आदर्श साथी र बुबा हुनुहुन्छ, वा उहाँसँग समानान्तर जीवन छ जुन उनलाई दिनहुँ घरबाट टाढा लैजान्छ। र को रूप मा तपाइँको छोरी वायोलेट, के उनी एक उज्जवल र गाह्रो केटी हो जसले केवल उनीबाट बढी ध्यान खोज्छे, वा उनी जन्मबाट नै खराब छ?
ह्यामनेट - Maggie O'Farrell
22 फेब्रुअरीको लागि
यो थियो चयनित कोमो गत वर्षको एक उत्तम उपन्यास र अब यो अनुवाद आउँछ। यो लेखकको आठौं उपन्यास हो र योबाट प्रेरणा पाएको हो जीवन र विलियम शेक्सपियरको एक मात्र छोरोको मृत्यु। यो १ 1596 XNUMX in मा लिइएको छ र उनको हराएको छोरा शेक्सपियरकी पत्नी एग्नेस हैथवेको कथा बताउँदछ, दु: ख र सर्जनशीलता को महान शक्ति को कगार मा ल्याइएको विवाह को।
चिहान खोल्नको लागि - जो हिल
आफ्नो बुबा स्टीफन किंग जत्तिकै प्रशंसक लेखक बन्ने बाटोमा उनी फर्कन्छन् जो हिल। र उसले यो नयाँसँग गर्दछ कथा संग्रह (दुई उहाँसँग सह-लिखित), जहाँ उहाँ विकास गर्नुहुन्छ शानदार सेटिंग्स मा धेरै मानवीय संघर्ष.
उदाहरण को लागी, हामी संग एक छ Puerta जब अचम्मै कुराले भरिएको संसारलाई रगतले भगाउँछ जब शिकारीहरूको समूह यसमा जान्छ। OR दुई भाइ जसले अन्डरग्रोथमा मद्दतको लागि बोलाउने बच्चालाई मद्दत गर्नको लागि अग्लो घाँसको लेबिरिंथिन क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन्। वा एक ट्रक चालक जो नेभाडा मरुभूमिको बाटो भएर घुमफिर गर्ने चेष्टामा संलग्न छ। पहिले नै चार किशोर तिनीहरू एक पुरानो carousel सवारी जहाँ प्रत्येक पालो भयानक परिणाम हो। लाई पनि लाइब्रेरियन जो पा wheel्ग्रा पछाडि मृतको लागि पढ्न जान्छ। OR दुई साथी जो पोखरीको किनारमा प्लीयोसौरको लास पत्ता लगाउँदछन्।
टेरेसा लान्जाको गाढा अलविदा - टोनी हिल
11 फेब्रुअरीको लागि
टोनी हिल पनि यस कथा संगै फर्किन्छ कि पछि के भयो बताउँछ टेरेसा लान्जा नामको एक युवा होन्डुरानको मृत्युजो झ्यालबाट शून्यमा उफ्रियो। एक बर्ष बितिसक्यो र अझै पनि कसैले पनी व्याख्या गर्न सक्तैन किन उसले यस्तो गर्यो। एक दिन, टेरेसाले सफा गरेको घरहरूको ढोकामा, केही पोस्टर आफ्नो फोटो, एक कालो क्रस र एक संग Mensaje: ER कसले टेरेसा लान्जालाई मार्यो? »।
त्यस बेला देखि पाँच साथी र तिनीहरूको परिवारको जीवन तिनीहरू फेरि कहिल्‍यै फेरि हुनेछैनन्। तिनीहरूले आफ्नो घर टेरेसालाई हस्तान्तरण गरे, तर अब उनको सम्झना खतरामा परिणत भएको छ जसले केहीलाई उदाउँन सक्छ रहस्यहरु तिनीहरूले खोज्न को लागी प्राथमिकता.
शान्ति समस्या - जो Abercrombie
25 फेब्रुअरीको लागि
काल्पनिक विधा को एक मान्यता प्राप्त लेखक मध्ये एक, Abercrombie प्रस्तुत गर्दछ दोस्रो डेलिभरी को त्रयी बाट पागलपन को युग, जसको पहिलो शीर्षक हो थोरै घृणा। अक्षरहरूको अवतार लिनुहोस् जुन विश्वको सर्कलमा लोकप्रिय छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » सबै विधाको फेब्रुअरीका लागि new नयाँ विज्ञप्ति
मलाई लाग्छ कि म जो हिलको "ओपन ग्रभ" तिर झुकाउनेछु। मैले हार्न्स पढ्न सकें र मैले यो अविश्वसनीय पाएँ त्यसैले म उनको कार्यको बारेमा बढी जान्न चाहन्छु।